musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mutsvene Lucia Breaking News » Saint Lucia inogadziridza paDutu Elsa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • chengetedzo • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
NeChishanu, Chikunguru 2, Chikamu 1 Dutu Elsa rakapfuura chitsuwa cheSaint Lucia. Ongororo yekuona huwandu hwehuwandu hwechitsuwa ichi hwakaitika kubva pakaitika dutu.
Dutu racho harina kukuvadza zvakanyanya kune zvivakwa zvekushanya.
Mutemo Wakajeka Wese wakapihwa na9: 45pm muna Chikunguru 2 neNational Emergency Management Organisation (NEMO).
Tourism uye mashandiro enhandare atangazve zvizere mangwanani ano.
Saint Lucia Mhepo uye Gungwa Ports Authority (SLASPA) inoshuma kuti Hewanorra International Airport (UVF) uye George FL Charles Airport (SLU) vatangazve mashandiro akajairwa na10 mangwanani ano nekuda kwekuuya nekubva kwendege. Vafambi vanokurudzirwa kuti vatarise pamwe nendege dzavo kuti dzivandudze. Mukuyedza kugadzirisa nguva dzekugadzirisa, vafambi vanokurudzirwa kutarisa mangwanani.
Saint Lucia Hospitality & Tourism Association (SLHTA) inoshuma kuti hotera nenzvimbo dzekuchengetedza zvakafambiswa zvakanaka pasina kukuvara kwepfuma. Kuchenesa kwekuzora kuri kuenderera mberi kunzvimbo dzinoenderana nezvekushanya. Vashanyi vemuhotera vakachengetedzwa neve-pa-timu zvikwata uye vakachengeteka mukati mezvavanogara nzvimbo.
Mhepo uye mamiriro emvura akakonzera kumwe kukanganisa muSanta Lucia uye magetsi anoenderera kudzoreredzwa munzvimbo dzakaitika kubuda. Migwagwa yemigwagwa yakaonekwa yakachengeteka kuyambuka nebazi rezvivakwa. Iko hakuna mishumo yekukanganiswa kune iyo mvura yekupa.
Bazi rezvehutano rinozobvuma zvisina kunaka kwechinguva Covid-19 PCR bvunzo mhedzisiro yakura kupfuura mazuva mashanu ekuuya vanokwira kuSanta Lucia kusvika Svondo, Chikunguru 5, 4, chete. Kuregererwa kwenguva pfupi ndekwekufambisa vafambi vanokanganiswa neDutu Elsa. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Covid-2021 protocols uye kupinda muSanta Lucia, ndapota shanya www.kirari.org/covid-19.
Kuti vakwanise kubaya jekiseni rakazara, vafambi vanofanirwa kunge vaine muyero wekupedzisira wemishonga miviri-COVID-19 jekiseni kana jekiseni rimwe chete rinodarika vhiki mbiri (mazuva gumi nemana) vasati vafamba. Vafambi vanoratidza kuti vakabaiwa jekiseni pavanozadza fomu risati rasvika reKufambisa Mvumo, uye woisa humbowo hwejekiseni. Vashanyi vanofanirwa kufamba nemakadhi avo ekudzivirira kana zvinyorwa. Pakusvika muSanta Lucia, pre-vakanyoreswa zvizere vachengeti vashanyi vanozokurumidza kuburikidza neiyo yakatsaurwa Health Screening mutsetse uye vanozopihwa neisiri-yemagetsi yekuzivisa bhande rebhandi kwenguva yekugara kwavo. Iri bhandi rewrist rinofanira kupfekwa mukati mekugara uye kubviswa kana uchibva kuSanta Lucia.
Vafambi vasina kubaiwa jekiseni vacharamba vachibvumidzwa kugara kunzvimbo dzinosvika mbiri dzinovhenekerwa kwemazuva gumi nemana ekutanga uye vasina-kubaiwa vachena vanodzoka vanofanirwa kunyorera kugara kwavo kwavo panguva imwecheteyo.